5 sọftụwia dịka aghụghọ aghụghọ nkwekọrịta ọrụ iji zere | Martech Zone
Dịka ụlọ ọrụ na-akwado ndị ahịa anyị kpamkpam, anyị na-azụta nkwekọrịta maka ngwa na nyiwe dị ntakịrị iji kwado mbọ ndị ahịa anyị. Imirikiti mmekọrịta ndị ahụ na Software dị ka a Service (SaaS) ndị na-ere ahịa dị oke mma - anyị nwere ike ịdebanye aha na ntanetị ma anyị nwere ike ịkagbu mgbe anyị mechara. Na afọ gara aga, agbanyeghị, anyị ewerela n'ụzọ nkịtị na nkwekọrịta ole na ole. N'ikpeazụ, ọ bụ mbipụta dị mma ma ọ bụ ire ahịa na-eduhie eduhie nke dugara anyị n'ifu ntakịrị ego. Agaghị m akpọ aha ebe a, mana ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị ama ama - ya mere kpachara anya. Ndị ụlọ ọrụ na-erigbu ndị aghụghọ a agaghị enweta azụmahịa m ma ọ bụ nkwanye m.
Ogologo nkwekọrịta nkwekọrịta pere mpe - Sọftụwia dị ka ụlọ ọrụ na-ejikwa njikwa akaụntụ yana usoro mmefu na-emefu nnukwu ego iji nweta ma nweta onye ahịa ọhụụ yana ọrụ ya. Ọ bụ nnukwu ego - tụkwasa m obi. Na-arụ ọrụ maka ọrụ ESP n'oge gara aga, anyị nwere ike imefu ọtụtụ puku dollar iji nweta onye ahịa na-eziga email mbụ ha. N'ihi ya, ịchọrọ ogologo oge nkwekọrịta dị mkpa maka ahụike nke ụlọ ọrụ ahụ. kaadị akwụmụgwọ ma malite iji akaụntụ gị taa, ị ga-enwe ike kagbuo akaụntụ gị taa. Lelee ezigbo mbipụta. Anyị chọtara SEO engine nke anyị debanyere aha ya wee ghara ibi ndụ na-atụ anya nwere nkwekọrịta ọnwa isii kachasị. Ekwenyesiri m ike na ihe kachasị mkpa bụ naanị n'ihi na a na-ekwe nkwa n'elu ikpo okwu ha, na-enyefe ha ma ha na-achọ ndị ahịa ego karịa.
Banye Taa, Bill Echi - Onye na-ere ahịa SaaS gị bụ ezigbo enyi gị ruo mgbe ị mechiri. Enwere okwu ọzọ maka a nkwa ahịa edeghị ihe ahụ na nkwekọrịta. A na-akpọ ya a ụgha. Anyị bịanyere aka na nkwekọrịta kwa afọ na nnukwu ndị na-ere ahịa n'elu ikpo okwu n'afọ gara aga. Onye na-ere ahịa ahụ nọ na nrụgide dị ukwuu ma chọọ ịbịaru nso n'okpuru waya maka afọ ahụ ka ọ kwere anyị nkwa na ha agaghị akwụ ụgwọ ruo mgbe anyị malitere iji ikpo okwu. Anyị bịanyere aka ma debe akwụkwọ ozi ozugbo. Mgbe m akwụghị ụgwọ ahụ ngwa ngwa, ezigara ya na nchịkọta. Ugbu a ụlọ ọrụ na-anakọta ụtụ na-akpagbu anyị. Ruo taa, anaghị m arụ ọrụ n'elu ikpo okwu ma anaghị m akwụ ụgwọ ahụ. Ha nwere ike ịgba akwụkwọ ma ọ bụrụ na ọ ga-amasị ha. M ga-n'aka na ha emefu ihe na iwu ego karịa mgbe ọ bụla na-enweta a dollar m.
Nchịkọta Agencylọ Ọrụ - Otu ụlọ ọrụ mụ na ya nwere mmekọrịta onwe m gbara m ume afọ ole na ole gara aga ịbanye na ụlọ ọrụ ha na ha. N'okpuru gị n'ụlọnga nkwekọrịta, anyị ga-akwụ opekempe ego kwa ọnwa wee kwa ahịa Ihe ngwugwu ụlọ ọrụ nyere anyị aka inweta nkwado nkwado, ịnweta ohere niile na njirimara niile, oche na kọmitii ndụmọdụ ngwaahịa ahụ, wee depụta ya dị ka ụlọ ọrụ enyere ikike na saịtị ha. Ọ dị ka azụmahịa zuru oke - ruo mgbe anyị gụrụ na anyị ga-enye ndị ahịa anyị 75% nkwado. Ndiife - ebe ahu ụgwọ niile bụ! Ekwesịrị m ịbanye ọtụtụ ndị ahịa ka m nwee ike ịkwụ ụgwọ ndị ọrụ raara onwe ha nye ma ka na-erite uru na mmekọrịta ahụ. Anyị ga-aga n'ihu na-ezo aka na ndị ahịa na onye na-eweta ọrụ a, mana anyị agaghị edebanye aha akwụkwọ ụlọ ọrụ ahụ.
Ejiji na veragegwọ - Nnukwu ụlọ ọrụ ngwanrọ na-egosipụta nghọta zuru oke banyere ụgwọ ojiji ha - ọkachasị mgbe a bịara njuputa ụgwọ. Anyị hụrụ ụdị dị ka Amazon nke na-akwụ ụgwọ maka ojiji ma belata nnukwu ị na-eji usoro ha. Likelọ ọrụ dị ka Circupress ga-eji nwayọ mee ka ị gbagoo ma ọ bụ gbadaa na nkwekọrịta gị dabere na ọnụọgụ ndekọ na ozi ịntanetị ị na-ezipụ. Ọ bụrụ na ị na-ezigara ndị ọzọ, ọ ga-abụrịrị na ọnụahịa ọ bụla ezigara. Companieslọ ọrụ ndị ọzọ na-ata gị ahụhụ maka iji ya. atụle n'usoro ire ahịa (ekpughere ya na saịtị ha mana anyị atụfuru ya). Otherlọ ọrụ ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ mgbe ị gafere usoro e nyere gị nke sistemụ ha (bandwit, akaụntụ, ozi ịntanetị, mkpọsa, wdg). Jide n'aka na ojiji na overage ụgwọ ndị ikwu na nloghachi gị ego na n'ezie na-agba ume iji nke usoro kama na-akụda ojiji.
Nchekwa onwe-megharia - Enweghị m ike ịgwa gị ugboro ole ụlọ ọrụ dọwara m aha m debanyere iji nwalee akụrụngwa ha, m kagburu ya, ọnwa na-esote m boro m ebubo ọzọ. Ọ baghị uru n ’ụlọ ọrụ ọ bụla, ihe a dakwasịrị m na obere ọrụ na nnukwu. Chọpụta tupu oge eruo ma ọ bụrụ na emegharịrị nkwekọrịta na akpaaka ma hụ na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ikike gị tupu ịmegharị ma ọ bụ na-aga n'ihu ma ọ bụrụ na ịnweghị atụmatụ ozugbo nke imeghari.
Usoro, Usoro Ọrụ na Usoro Billgba aregwọ dị oké mkpa iji ghọta mmekọrịta gị na onye na-ere ahịa. Chọpụta ihe na-eme nkwekọrịta gị na mmekọrịta gị na onye na-ere ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị abanye n'okwu ndị a:
Ịkagbu - ị naghịzi achọ ma ọ bụ nwee ike ị nweta ego Saas. Companieslọ ọrụ ndị na-ahụ maka onwe ha na-enyekarị ọkwa ụbọchị 30 ma ọ bụ ọbụla kagbuo ozugbo site na ikpo okwu ha. Kpachara anya maka ụlọ ọrụ ị na-edebanye n'ịntanetị na kaadị kredit mana ị nwere ekwentị iji kwụsị akaụntụ gị. Ọ dị nfe ịkwụsị ịgba ụgwọ n'ịntanetị dịka ọ dị mfe ịmalite ya! Maka ụlọ ọrụ ndị nọ n'ụgbọ, ndụmọdụ na nkwado, nkwekọrịta pere mpe nke ọnwa 6 ma ọ bụ karịa ka a na-ahụkarị.
ojiji - nwere ike ịgbanwe ojiji n’ụzọ dị mkpa - ma ọ bụ mụbara ma ọ bụ belatara. Ekwesiri iwepu ego gi maka ojiji na ojiji nke sistemu ma ghara inye gi ntaramahụhụ maka iji ihe ngwanrọ eme ihe. Pnye ọnụahịa kwesịrị ịgbanwe maka ojiji na nloghachi gị na ego ga-abawanye ka ị na-ahu nagide usoro ihe.
Inwe onye ọka iwu na njikere bụ atụmatụ kachasị mma mgbe niile! Ọtụtụ oge na adọkaara anyị ọ bụ naanị n'ihi na anyị agafeghị nkwekọrịta ahụ n'aka ndị ọka iwu anyị dị egwu Alerding Castor Hewitt.
Tags: inye ikike gị n'ụlọngaụlọ ọrụ ịnye ọnụahịaịgba ụgwọusoro ịgba ụgwọnkwekọrịta aghụghọcontractsụgwọ kwaoverage akwụ ụgwọsaassoftware dị ka ọrụojiji ngwanrọusoro ojijiobere ụgwọ